Tijaabinta saxnaanta xogta kor u kicinta Google - Soo rar! - Geofumadas
Tijaabinta saxnaanta xogta kor u kicinta Google - Soo rar!
Juunyo, 2019 Google Earth / Maps, topografia
Google Earth waxay ku siineysaa xogtaada kor u qaadista iyadoo la adeegsanayo Google Google API. Design of Civil Civil, ka faa'iidaystaan ​​fursaddan leh iyada oo cusub function Satellite ilaa Surface. Farsamadani waxay kuu oggolaaneysaa inaad dooratid aag iyo masaafada u dhaxeysa dhibcaha shabakadda, waxay ku soo noqotaa dusha sare ee isku dhafan ee lagu dhejiyo software-ka Nidaamka Qorshaha Madaniga iyo muuqaal heegan.
Lance Maidlow of ChasmTech LLC ayaa dhisay kiiskan isticmaalka in lagu daabacay ee Majaladda TwinGEO
Marwalba waan ka walwalsanahay saxnaanta xogta ay bixisay Google. Waxaa jiray laba kiis oo suurtagal ah oo aan maanka ku hayo:
Naqshada fikradaha / hordhaca ah ee qaybaha cusub.
Helitaanka sawir-qaadka sare ee warshadda si loo falanqeeyo boodhadhka HEC-RAS 2
Ujeedada qiimaynta, waxaan doortay labo goobood:
Websaytka 1 wuxuu ahaa qaybta sare ee Dunedin, Florida. Tani, waxaan markii hore ka soo dejiyey oo ka baaraandegi jiray 2 malaayiin ka mid ah dhibcaha LiDAR ee bogga NOAA.
Goobta ahaa hoosaadka a 2 ganacsi la soo jeediyay in Lake County, Florida, meeshaas oo aannu u lahaa xogta sahanka ee Roobka ah cagaha 100 iyo sidoo kale sahan faahfaahsan kaabayaasha hadda jira.
Shaqada dayax gacmeed, goobaha la sameeyay ee labada goobood ee tijaabada ah wax ka yar saacadaha 10 mid kasta. Meelaha ka soo baxa xogta Google ee heerarka sare waxay ahaayeen kuwo la yaab leh marka la barbar dhigo xogta LiDAR iyo xogta sahanka.
Si kastaba ha noqotee, waxay noqon doontaa mid aad u faa'iido badan haddii Google laga helo ilaha iyo taariikhda xogtaada sare.
Natiijooyinka ayaa aad u egyihiin, inkasta oo dhibcaha asalka ah ee LiDAR ay ahaayeen cagaha hoose ee 8.5 marka la barbar dhigo heerka harada la yaqaan. Isbedelkan waxaa lagu darey xogta LiDAR ee Mashruuca Madaniga ah ka hor inta aan la samaynin wareegyo, sida hoos ku cad falanqaynta faahfaahinta xogta dusha sare ee labada ilood. Celceliska dhererka 1 / 2, 1 / 3 iyo 2 / 3 waa kuwo isku mid ah. Dhimashada celceliska miisaankiisu waa 3 feet ka sarreeya xogta LiDAR. Farqigaas waxaa loola jeedaa xaqiiqda ah in dhibcadu ay yihiin cufnaanta goobaha furan marka loo eego meelaha ay daboolayaan geedaha. Xogta dayax-gacmeedka waxaa lagu soo saarey 20 '.
Marka xigta, kormeer muuqaal ah oo ku saabsan xogta dayax-gacmeedka ah ayaa la soo bandhigay kaas oo isbarbardhigaya xaaladaha dhabta ah ee dhulalka.
Xaaladdan gaarka ah, nooduusku waa in lagu dhejiyaa kor u kicida Google, marka la eego saxnaanta cayilan iyo qaabka guud ee curves ee la xidhiidha waddooyinka jira iyo xaaladaha degaanka ee guryaha.
Qeybinta Aagga Ganacsiga
Tusaalaha soo socda, hoosaadka ganacsiga, khadadka dusha ayaa laga Roobka a of 20 'la data satellite, gooladaha cas ayaa laga helay xogta aqoonsiga ee Roobka ah 100'.
Aqoonta maxaliga ah, si kastaba ha ahaatee, muhiim maadaama xogta sarreysa aysan haysan taariikh la cayimay. Niyadjab ayaa la dhameeyey waxaana la soo saaray badeecad kadib markii ay ururiyeen xogta Google ee sarreeya. Sidoo kale, balli qabasho ayaa laga dhisay waqooyi-bari ee goobta, ka dib markii xogta sarraysa oo dhan la ururiyey.
Ilaha xogta kor loo qaado ee Google, waxay ku xiran tahay meesha aad joogto. Inkasta oo macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan xogta kor u qaadista Google laga heli karo ilaha qaarkood, waxa ay weli tahay qarsoodi.
Iyadoo falanqaynta tani ma aha sayniska, waxa ay tilmaami kartaa in xogta ka soo Google Sare u qaadid waa la aqbali karo oo la oran karo waa, waayo, horumarka design fikradeed ama in ay curiyaan weysada dusha a, taas oo loo isticmaali karaa lafo-daad leh codsiyada sida HEC Raas 2.
Post Previous«Previous Talaabooyinka lagu raadinayo telefanka gacanta
Post Next Sida ugu fiican ee BIM Summit 2019Next »
Hal Jawaab u Jawaab "Baaritaanka saxsanaanta Google ee xogta sarraysa - Soo rar!"
ONL ARROYO HERMOSO isagu wuxuu leeyahay:
Way adag tahay in la isbarbardhigo fiicnaanta / saxnimada xogta tirakoobka ee laga helay ilo kala duwan.
Dhibaatadu waxay ku jirtaa habka / xisaabinta habka DEM ama macluumaadka lidar ee la barbardhigay ayaa la helay -> tallaabo mesh, oo loo tixgeliyey qaabka joomitir, qodobbada xakamaynta iwm.
Waxaan daraasad ku sameyn doonaa Spain si aan u barbardhigo Lidar of IGN, daraasad GPS GPS ah oo lagu taageeray heerka saxda ah iyo dhulka google -> blog in aan kuu sheegi doonaa waxa ka soo baxa ....http://autodidactaengeomatica.blogspot.com/
Salaan iyo mahadsanid aad ku ...